गाउँ–गाउँमा प्रेमका गड्बडी « Jana Aastha News Online
गाउँ–गाउँमा प्रेमका गड्बडी
प्रकाशित मिति : २९ पुष २०७३, शुक्रबार ०८:२०
अहिले यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाए उहिल्यै अर्कैसँग माया–प्रेम गाँस्थें । यस्तो अवस्था सिर्जना हँुदैनथ्यो । उनी यति राम्री थिइन् कि वर्णन गर्न कुनै त्यस्तो शब्द छैन । एक घण्टा मात्र पनि टाढा हुनुपर्दा एक जुग नभेटेजस्तो हुन्थ्यो । सायद आज यस्तो व्यहोर्न रहेछ । रोएर केही पनि नहुने । अहिले सुजाताको नाम सुन्न चाहन्नँ ।
त्यतिखेर गाउँमा केटाकेटीले मायाप्रेम गाँस्ने हुरी नै आएको थियो । चलचित्र हेर्न तीन घण्टाको बाटो हिँड्नुपथ्र्यो । मोली गाविसमा अधिकांश घर खरले छाए पनि सुजाता र सुमनको घर भने जस्तापाताले छाएका छन् । मोली–३ राईहरूको थलो हो । राई गाउँका अरू केटाकेटी धुस्रेफुस्रे भएर हिँड्दा उनीहरू सुकिलामुकिला भएरै हिँड्ने गर्थे । अरूको घरमा ढिँडो र टिम्बुर हालेको सिस्नुको बास्ना आउँदा उनीहरूको चुलोमा चामल र मासुको खान्की पाक्थ्यो ।
गाउँमा अर्मपर्म नगरी जीवन धान्न मुस्किल पर्छ । एक्ले अर्काेलाई सहयोग नगरे भोलि एक्लै होइन्छ । यो नियम मोली गाउँका बासिन्दाले राम्ररी बुझेका मात्रै छैनन्, आपसी सहयोग गर्न पनि जानेका छन् । अरू बेला वनपाखातिर घाँस–दाउरामा व्यस्त रहने ती गाउँले चैत लाग्नेबित्तिकै बारीमा मल बोक्न थाल्छन् । असार लागेपछि बिलन्दुमा धान रोप्न र खेतबारीमा कोदो रोप्न शुरु गरिहाल्छन् ।
कसरी हो कुन्नि उनीहरूको भेट दैवले राजकुमारको कोदोबारीमा जुराइदियो । असार दोस्रो साता शुरु भइसकेको थियो । झरीको याम बारीमा घुम ओढेर कोदो रोप्न मजा आइरहेको थियो । असारको सिरेटो मुुटु चिसाउने खालको भए पनि त्यो दिन उनीहरू दुवैको मुटुलाई त्यो सिरेटोले छुँदै छोएन । झमक्कै रात परिसकेको थियो । राजकुमारका सबै खेतालासहित सुजाता अघि–अघि लागिन् सुमन पछि लुरुलुरु एकाग्र भएर हिँडेका देखिन्थे । उनलाई त्यो कोदोरोपाइँ अझै नसकिएको भए हुन्थ्योजस्तो लागिरहेको थियो । कोदोबारीमा दुई जनालाई रातभर कोदो रोप्ने ठेक्का पाए पनि हुन्थ्योजस्तो लागिरहेको थियो । तर, सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ? यसरी दुई जना बसेर बेलुकी कोदो रोप्न थाल्दा समाजले के भन्छ ?
सुजातालाई पनि सुमनलार्ई जस्तै कहाँ राजकुमारको कोदोबारीमा बेलुकीभरि कोदो रोप्न मन नलागेको हो र ! उनलाई पनि सुमनसँगै मायाप्रेमका मीठा–मीठा कुरा गरेर बस्न मन त थियो तर समाजको नीति–नियमले भोलि साह्रो पाथ्र्याे । दिमागमा यस्तै खालका मनोभाव सिर्जना हुँदै अघिपछि हिँडेका उनीहरू कोदोबारीका साहु राजकुमारको घरमा टुप्लुक्कै पुगे । सबै जनाले जिउबाट ओढेका घुम निकालेर घरबाहिरको भित्तामा ठोकिएका किल्लामा झुण्ड्याए । उनीहरूले पनि भुण्ड्याए । उनीहरूको पहिलो भेट यही थियो ।
समय कहाँ एकनाशको हुँदोरहेछ, राजकुमारको कोदोबारीले दुवै जनाको नजर हेराहेरसम्म पु¥याएको थियो । तर, पछि कताबाट हो सुजाताकै बारीमा सुमन कोदो रोप्न पुगेछन् । ढुंगा खोज्दा देउता मिलेझंै उनीहरू दुवैले साँच्चिकै देउता भेट्टाए । गाउँमा तलतिर–मास्तिर घर भए पनि बोलचाल कमै हुन्छ । खासै केटाकेटीको हिमचिम हुँदैन । तर, चैत र असारमा भने मनग्गे हुन्छ । यही सिजन मायाप्रेमको हो भन्दा फरक नपर्ला । उनीहरूको हकमा पनि यहि लागू हुन पुग्यो ।
असारमा रोपेको कोदोले मोलीका अरू घरपरिवारमा महिना दिन धान्न धौधौ पथ्र्याे तर उनीहरूको वर्षभरि खान पुग्ने । उनीहरू मकै, कोदो र धान न किन्थे, न बेच्थे । आफूलाई सजिलै पु¥याउँथे ।
त्यो दिन राजकुमारको कोदोबारीमा जस्तो झरी परेको थिएन न त टण्टलापुर घामै लागेको थियो । मौसम धुम्मिएको थियो । वनपाखातिर कोइलीले को हो, को हो भनिरहेको थियो । यता, सुजाता र सुमनलाई पनि आफ्नो परिचय पाउने तलतल जागिरहेको थियो । तर, कोदो रोप्ने व्यस्तताले मौकै आएन । जसोतसो दिउँसोसम्म कोदो रोपे । त्यसपछाडि नै हो बल्ल उनीहरूले परिचय साटेको । दिउँसो एक घण्टा खाजा खाने (विश्राम लिने) समय छुट्याइएको थियो । यही बेला आमाले सुजातालाई बोलाएर सुमनसँग खाजा लिएर आउन अह्राइन् ।
कोदोबारीबाट सुजाताको घर पुग्न १० मिनेट लाग्छ । राजकुमारका कोदोबारीमा अघिपछि भएका उनीहरू अहिले सँगै गफ गरेर हिँडिरहेका छन् । यस्तैमा पहिला सुमनले सोधे– तिम्रो नाम के नि ? सुजाता । अनि तिम्रो ? मेरो सुमन । दुवै जना एकछिन मुसुमुसु हाँसे । दुवैका नाम अगाडि ‘सु’ आएको हुनाले । एकछिन रोकिँदै सुमनले भने, ‘कस्तो राम्रो नाम ठ्याक्कै एउटै पो परेछ ।’ सुजाताले उत्तर दिँदै भनिन्, ‘अँ ! हुन्छ नि †’ यस्तै गफ गर्दागर्दै घरमा पुगे । खाजा खाएर विश्राममा खुलेर कुरा गरे ।
अध्ययनमा सुजाता सुमनभन्दा एक श्रेणी माथि थिए । उनकी दिदी चन्द काठमाडौंको स्वयम्भूमा बसेर पढ्थिन् भने सुमनका दाजु इशान दुबईमा रोजगारी गर्न गएका थिए । उनी प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)को तयारीमा थिइन् भने सुमन भर्खर नौ कक्षामा पढ्थे । तर, माया–प्रेमलाई न उमेरले छेक्छ न त पढाइले । कालान्तरमा छुट्टिनै नसक्ने चखेवाको जोडी बने । चलचित्र हेर्न तीन घण्टाको बाटो लगाएर सदरमुकाम ओखलढुंगा पुगे । पहिलोपटक निखिल उप्रेतीले खेलेको फिल्म ‘पिँजडा’ हेरेर फर्किए । त्यसपछि त झन् एकक्षण नभेट्दा हजार वर्ष छुट्टिन पुगेजस्ता हुन्थे ।
अचानक सुजाता प्रवेशिका परीक्षा तयारीका लागि काठमाडौं जाने भइन् । उनमा उमंग छाएको थियो । तर, सुमन छट्पटिएका थिए । कतै उनले काठमाडौं गएर बिर्सने त होइन ? त्यतिखेर अहिलेजस्तो छ्याछ्याप्ती मोबाइल फोनको सुविधा थिएन । फोन गर्न राजकुमारकै घरमा पुग्नुपथ्र्यो कि त मगरगाउँ मेघेको पसलमा । सुजाता गएको दिन नै सुमनले दिदीको फोन नम्बर कापीमा सारेका थिए । भोलिपल्टै मेघेको पसलबाट फोन गरे । सुजाताकी दिदी शुरुमा त अलमल्ल परिन् केटा मान्छेको स्वर सुनेर । सुजातालाई कुनै अचम्म लागेको थिएन किनकि काठमाडौं आउनुअघि दिदीको फोन नम्बर सुमनलाई दिएकी थिइन् । आधी घण्टापछि सुजाताले एक महिना पछाडि आउने वाचा गरे पनि दुई महिनापछि पुगिन् । त्यसबीच सुमनले घरी–घरी फोन गर्थे तर सुजाताले कहिल्यै गरिनन् ।
कारण, उनी काठमाडौंमा पढ्दा पढ्दै अर्कैसँग नजिक हुन पुगिन् । केटा मोली गाविस–९ नम्बर वडाका सुवास राई थिए । उनी दाइ पदमसँग काठमाडौंमा बस्थे । दुई महिनापछि सुजातासँगै मोली फर्किए । काठमाडौंबाट आएर एकरात सुजाताको घरमा बिताए । तर, सुजाताले सुमनलाई न बोलाइन्, नत भेट्नै गइन् । अब, उनी सुमनविना बाँच्न सक्ने भइसकेकी थिइन् । र, अहिले पनि बाँचिरहेकी छन् ।
काठमाडौंबाट सुजाता फर्किएको भोलिपल्ट सुमनले एक जना केटासँग आएको थाहा पाए । धरधरी रोए † तर, भेट्न गएनन् । उसले आखिर मेरो माया लत्याइदिएपछि भेट्नु किन ? परीक्षामा सुजाता गणित विषयमा चिप्लिइन् भने सुवास अंग्रेजीमा । त्यसपछि दुवैले बिहे गरे । सुमनलाई उनीहरूको बिहेअगावै यो चाला थाहा पाएकाले मायामा कुनै काँडा भएनन् । गाउँबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेर काठमाडौंको पेप्सीकोलामा दाइसँग होटल सञ्चालन गरी बसेका छन् । अब पढाइभन्दा व्यवसायमा होमिने सोच बनाएका छन् ।
बोइलर पिरतीको दुनियाँमा भिन्न देविका
पहिलो प्रेमको कहिल्यै निबर्सने पीडा
पत्रकार महिला आफैं पीडामा परेपछि
रित्तो खल्ती बोकेर यात्रामा निस्केको छु
‘विद्वान’ले वृद्धलाई यतिसम्म रूवाए बरिलै
मान्छेभित्र हुने रहेछ लुकेको अर्को मान्छे
यसमा मेरो के दोष, भनिदेऊ न मान्छे !
मर्दा पनि जो आफ्नो सौन्दर्यमा मख्ख थिइन्